Imikhiqizo ye-Universal Electronics Imiklomelo Yokunqoba Nezobuchwepheshe Qhubeka KuDrayivu Ukutholwa Kwezokuzijabulisa Kwezwi Lokuzijabulisa EYurophu Yabaqhubi Bokukhokhela I-TV - I-NAB Khombisa Izindaba Ngezokusakaza Beat, Umsakazo Osemthethweni we-NAB Show - NAB Bonisa LIVE
Enschede, eNetherlands - 06 December 2018 - Ngemva kokuqaliswa kwezinguquko eziyisithupha ezilawulwe ngezwi kanye nezinkampani ezihola i-Pay-TV eYurophu ezinyangeni eziyisithupha ezedlule, i-Universal Electronics Inc. (i-NASDAQ: UEIC) (UEI), umholi womhlaba jikelele ekulawuleni yonke nokuzwa ubuchwepheshe, uyaqhubeka nokuhola imboni ekuhambiseni amapulatifomu okulawula aguqula indlela abathengi abahlanganyela ngayo ukuzijabulisa kwabo emhlabeni jikelele.
Ngokusho kwedatha yemakethe, izilaleli ze-TV zanamuhla zichitha isilinganiso samahora angu-4.4 ngosuku zibuka i-TV futhi cishe imizuzu engu-28 ngosuku ngokufuna okuqukethwe. Ukuzulazula kwezwi nokulawula, okulethwe ku-2015, kuye kwaletha ubukhulu obusha ekubukeni kwe-TV. Eminyakeni embalwa, ubuchwepheshe bezwi buguquke kusukela kwisici sokwengeza ukuze sibe yithuluzi elibalulekile labathengi abathembele ekuphileni kwabo kwansuku zonke ekufinyeleleni ukuzijabulisa, ulwazi, kanye nezinsizakalo.
Ukuthuthukiswa kuka-UEI ekuhambiseni kwezwi ngokwemvelo kusheshe kube amandla okuphazamisa indlela abathengi abaxhumana ngayo namadivayisi abo kanye nokuqukethwe kwe-TV. Namuhla inkampani isetshenzisile elinye lamathimba ethuthuko abanolwazi nakakhulu embonini ukuletha ukuxhumana kwezwi okunokwethenjelwa namadivayisi wokuzijabulisa ekhaya. Kusukela ku-2015, i-UEI inikeze izixazululo zokulawula ezikude ezikhulunywe ngezwi eliphakathi kuka-60 ezimboni zokuzijabulisa.
Ngokucwaninga nokuthuthukiswa komthengi, u-UEI uye wavula njalo futhi wakhipha izincazelo ezintsha ezenza kube lula ukwenza okuhlangenwe nakho kwansukuzonke ngaphakathi kwekhaya elihlakaniphile. U-UEI uye wakhulisa ngokuzikhandla iminikelo yokulahlwa kwezwi nge-microprocessors ye-state-of-the-art, ngokuqinile ngokuhambisana nesofthiwe nokuklama kwe-acoustic, ukuthuthukisa ukunemba kokuxhumana kwezwi nsuku zonke.
Ihlanganiswe ne-QuickSet ehola umhlaba jikelele ka-UEI® ubuchwepheshe, amapulatifomu okuzijabulisa anikwe amandla ngezwi ahlinzeka abathengi isipiliyoni esingenakulinganiswa sokuzijabulisa ukuletha i-TV, isethi-phezulu, nokulawula kokuqukethwe ibe isikhombikubona esisodwa somsebenzisi.
Namuhla, abanikazi be-UEI basebenza ngokusebenzayo kuma-platforms ezizukulwane ezizayo ezihamba phambili ze-opharetha emhlabeni jikelele, kufaka phakathi amapulatifomu e-Android TV, okumelela isiteji se-Pay-TV esanda ngokushesha, eminyakeni emihlanu ezayo. Njengoba opharetha abaningi beqala amapulatifomu abo asezingeni eliphakeme bese befaka amazinga amasha embonini ezinyangeni eziyishumi nambili ezilandelayo, i-UEI ilindele ukwandisa ubuholi bayo ekulawuleni kwezwi futhi izoqhubeka nokuletha izintsha ezintsha ezimakethe.
"Nge-2023, kulinganiselwa ukuthi kuzoba ngabakholisisi be-Pay-TV abangaphezu kwezigidi eziyi-1 emhlabeni jikelele ngengxenye enkulu kakhulu ngokusebenzisa izwi njengendlela yokufaka umsebenzisi wabo wemvelo. Ukulawula izwi lamakhompiyutha kunamandla okwenza isipiliyoni sokubuka ekhaya somthengi siphezulu futhi sijabule, futhi ukutholwa kwayo kuzokwenza ukwaneliseka kwabathengi, "kusho uKaldip Singh Johal, uVice President Sales - Subscription Broadcasting e-EMEA ye-UEI.
Kuldip Singh Johal, Vice President Sales - Ukubhaliswa kokubhalisa ku-EMEA ye-UEI
"Njenganoma yibuphi ubuchwepheshe, kubalulekile ukuthi isipiliyoni somsebenzisi wokugcina sihle. Iholela ekusebenziseni njalo kwensizakalo. Sisebenza nabalingani bethu ukuqinisekisa ukuthi imikhiqizo yethu inikeza izinga elifanele lokusebenza nokuthembeka kokulawula izwi. Imizamo yethu iye yaqashelwa ngaphakathi kwemboni yokuzijabulisa ngoba sisanda kukhishwa i-Technology Emmy® yomsebenzi wethu ohlobene nobuchwepheshe bokuzulazula ngezwi ukuthola nokuxhumana nokuqukethwe kwe-TV. U-UEI ukhethwe ngokuzikhandla kwakhe kwezobunjiniyela kanye nobuciko obuye kwaphazamisa ukubhekwa kwethelevishini, "wanezela uJohal.
Ikusasa lokulawulwa kwezwi lithembisa ukuthi lizokhanya. Isibonelo, i-biometrics yezwi ingasetshenziselwa ukugunyaza abasebenzisi ekhaya, inikeze izincomo zokuqukethwe zomuntu nezinsizakalo eziphephile kusukela ekubhange ukuya ezitolo ze-intanethi kuya ku-oda lokudla. Namuhla, imizi engu-2.7 yase-UK isebenzisa isikhulumi esihlakaniphile esenziwe ngezwi ngenkathi i-22% yabathengi base-UK isebenzisa umsizi onguchwepheshe kwi-smartphone yabo. Leli nani lihlelwe ukwandisa njengoba imikhiqizo eminingi namasevisi angena emakethe, futhi umncintiswano wokuguqulwa uqinisa ngokwengeziwe nabakhiqizi abahlola izindlela ezintsha zokusiza abasebenzisi ukulungisa kalula amadivaysi amahle futhi bakhe ukuhlangenwe nakho okuhlangene okuhlakaniphile ekhaya.
I-ATEME Inika amandla i-CJ Sawubona Ekuqokeleleni i-Video Transcoding ukuhambisa izinsizakalo zevidiyo ezisezingeni eliphakeme ezigidini zokubuka - Disemba 5, 2019
Isidingo samakhasimende sezinsizakalo ze-TV ezenziwe umuntu sithinta iningi labasakazi ukunikela ngemikhangiso ehambelana nalokhu - Novemba 28, 2019
Imidlalo yeRiot isebenzisa iNevion Virtuoso eneJPEG XS ekukhiqizeni okukude kweLigi of Legends World Championship Final - Novemba 25, 2019